किड्नी बिगार्ने मानिसको एउटा यस्तो बानी : समयमै जानकारी लिनुहोस – Sandesh Press
July 25, 2021 237
मृगौला खराब भएको सुरुमा थाहा हुँदैन, त्यसैले यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ। गलत खानपान वा औषधीको साइड इफेक्टका कारण पनि किड्नी खराब हुने हुन्छ। केही सावधानी अपनाए, रोगबाट बच्न सकिन्छ।
जानेर वा नजानेर हुने हाम्रा दैनिक आदतले पनि किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। प्रायः मानिसको स्वास्थ्यको चासो रहेको किड्नीमा असर हुनुमा मानिसको लापरवाही मुख्य जिम्मेवार छन्। हामी आफै सचेत भएर मात्र मृगौला सम्बन्धि समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
यहाँ मृगौलामा समस्या कसरी आउँछ, त्यसका लक्षण के–के हुन्, मृगौला रोगबाट कसरी बच्ने, हामीले के–के खाने ? लगायतका केही जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं। तपाई पनि जानकारी राख्नुस् र आफ्नो परिवार तथा आफन्तलाई पनि यससम्बन्धि जानकारी दिएर रोगबाट बच्नुस् ।
१ चिसो सर्दी र चिसोको समस्या भइरहन्छ भने यसप्रति अज्ञानता नदेखाउनुहोस् । चिसोले पोस्ट इन्फे क्टिभ ग्लोमे रोनेफ्राइटिस नामक रोग लाग्छ । यसले किड्नीमा व्या क्टेरिया उत्पन्न गर्छ ।
२ खानामा धेरै नून खाँदा वा अन्य नूनिलो खानेकुराले पनि किड्नी खराब बनाउँछ । नूनले सोडियम ब्लड प्रेसर गराउँछ, जसको असर किड्नीमा पर्छ
३ पिसाब रोक्दा पिसाव थैली भरिन्छ । पिसाब भरिएर किड्नीसम्म पुग्छ । पिसाबमा हुने व्याक्टे रियाले किड्नीलाई हानी गर्छ ।
४ पानी कम वा ज्यादा पिउनु शरीरलाई दैनिक ८ देखि १० गिलास पानी पिउनु जरुरी छ । थोरै पानी पिउदा पनि शरीरमा जम्मा भएको वि-कारले किड्नीको नियमित कार्यलाई असर गर्छ । ज्यादा पानी पिउदा पनि किड्नीलाई असर गर्छ ।
५ चुरो-ट वा तमा-खु खाने सिग-रेट पिउँदा वा तमा-खु खादा शरीरमा वि ष जम्मा हुन्छ जसले किड्नी ड्या मेज गर्ने सम्भावना हुन्छ । धुम पानले प्रेसर बढाउँछ र अन्त्यमा किड्नीलाई असर गर्छ ।
६ जापानमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार धेरै कोल्ड ड्रिंस वा चिसो पिउनेलाई पनि किड्नी ड्या मेजको सम्भावना हुन्छ । कोल्ड ड्रिंसमा हुने अर्थोफोस्फोरस एसि डले किड्नीलाई गम्भीर हा-नी गर्छ ।
७ सामान्य मानिसको तुलनामा धेरै खाने मानिसलाई पनि किड्नीको सम-स्या हुन्छ । बढी खाँदा तौल बढ्छ । तौल बढी भएपनि किड्नीसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या हुन्छ ।
८ ज्यादा ननभेज खानेकुरा मासुमा प्रर्याप्त मात्रामा प्रोटिन हुन्छ । धेरै प्रोटिनले किड्नीमा मेटा-बोलिक लोड बढाउँछ र किड्नी स्टोनका समस्या ल्याउछ ।
९ दिनमा ७ देखि ८ घन्टा नसुत्ने मानिसमा उच्च रक्तचाप र मुटुको समस्या हुने गर्छ । रक्तचाप र मुटु रोगले किड्नीको समस्या निम्त्याउँछ ।
किड्नी जोगाउन के खाने ?
रातो च्याउ एक किड्नी मैत्री सब्जी हो, जसले किड्नीको प्रमुख कारक चिनि र मुटुसम्बन्धी रोग नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ किड्नीका लागि लाभदायी खानेकुरा मध्ये पनि एक हो । हाइपरटेन्सनका कारण पछिल्लो समयमा किड्नी गुमाउनेको सँख्या बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । दीर्घकालिन किड्नीका रोगीले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने खानेकुरामा यो पर्छ
रातो च्याउ किड्नीको लागि राम्रो मात्र होइन, प्रारम्भिक चरणमा हुने किड्नी रोगको खराब असरहरुलाई समेत यसले घटाउँछ किड्नी फेल भएका बिरामीलाई रातो च्याउको फाइदा अत्याधिक देखिन्छ । रातो च्याउमा एउटा यस्तो तत्व पाइन्छ, जसले स्वाभाविक रुपमा रगतलाई बाक्लो हुन वा जम्नबाट बचाउँछ ।
यसले एउटा हर्मनको रुपमा समेत काम गर्छ उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गरी किड्नी रोग हुनबाट बचाउँछ पेटमा जम्मा भएको बायुलाई फाल्ने एक प्रकारको विशेष तत्व हुन्छ । किड्नीमा समस्या आएपछि आउने सम्भावित ठूलो समस्यालाई रोक्न रातो च्याउले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
हाम्रो किड्नी यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ की ३० देखि ४० वर्षको उमेरमा पुग्दा किड्नीको छान्न सक्ने क्षमता स्वभाविक रूपमा घट्छ । तपाई ३० वर्षको पुगेपछि हरेक १० वर्षमा तपाईँको किड्नीको काम गर्ने क्षमता १० प्रतिशतले घट्दै जान्छ । जीवनको प्रारम्भिक कालदेखि नै किड्नीमा बढी चोट पार्नु भयो भने जीवनको उत्तराद्र्धमा तपाईँलाई किड्नीको समस्या बढ्ने धेरै सम्भावना हुन्छ ।
किड्नी रोगबाट बच्ने उपाय
चिनि रोग, उच्च रक्तचाप र मुटुको रोगको तत्कालै उपचार गर्नुहोस् वा यी रोग पालेर नबस्नुहोस् , नुनको मात्रा घटाउनुहोस्, दैनिक अत्यधिक पानी पिउनुहोस्, पिसाब कहिल्यै पनि नरोक्नुहोस्, उपयुक्त खानेकुरा खानुहोस्, स्वस्थ पेय पर्दाथ खानुहोस्,धुमपान र रक्सि सेवन नगर्ने, जान्ने बनेर जथाभावी औषधी नखाने, औषधीको थप परिणामसँग प्राकृतिक जटिबुटियुक्त खाना खाने ।
Prevकाठमाडौ लैजाँदै गरेको जेब्रा झोला खोलेर हेर्दा… प्रहरी नै चकीत परे हेर्नुहोस
Nextबिजय शाही बाट म ठ’गीए, ‘नेपाल जस्तो सुन्दर देशले यस्ताे ठ’ग्ने व्यक्ति न’पाउनुपर्थ्याे: नेल्सन डेलिस
सपनामा यी ५ चिज देख्नुभयो ? उसोभए तपाई छ्ट्टिै बन्नुहुनेछ धनी
नेपालमा गयो चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिको भुकम्प
सपनामा के के देखिन्छ ? सपनामा पैसा सुनमाल धन देखे के हुन्छ ? जान्नुहोस्